Haweeney xaamilo ah oo meydkeeda laga soo saaray ceel ay ku dhacday Deegaanka Garasbaaleey | Wakaaladda Wararka Qaranka Soomaaliyeed
Haweeney xaamilo ah oo meydkeeda laga soo saaray ceel ay ku dhacday Deegaanka Garasbaaleey
Garasbaley-(SONNA)-Allaha u naxariiste Hooyo Asli Muuday Muuse ayaa meydkeeda laga soo saaray ceel ay ku dhacday galabta deegaanka Garasbaaley ee duleedka magaaladda Muqdisho, Sida ay xaqiijiyeen maamulka deegaanka marxuumadda ayaa aruursaneysay xaabo ay dooneysay inay dabka ku shidato ka hor inteysan ku dhicin ceel ay ku geeriyootay.
Dadka Dadka deegaanka iyo maamulka Garasbaaleey ayaa u gurmaday si u badbaadiyaan hooyaddan uurka balse ugu dambeyn meydkeeda ka soo saaray ceelka.
AUN hooyo Asli Muuday Muuse ayaa heysatay afar carruur ah, waxaana ay ahayd xaamilo taas oo ku howlaneed sidii ay dabka ugu shidi laheyd dhallanka ay heysato.
Abaaraha ba’an ee ku dhufay meelo badan oo dalka kamid ah ayaa sababay inay la’daan xoolihii ay ku noolaayeen barakacaayal badan oo so dugaalsaday kaamam ku yaal duleedka magaaladda Muqdisho, iyago halkaas ka soo raadsay nolol dhaanta tay ku noolaayeen.
Marxuumaddan ayaa ahayd dadka dan yarta ah ee ka soo barakacay abaaraha daran ee saameynta ku yeeshay dadka iyo duunyada ee deegaano badan oo kamid ah goboladda dalka Soomaaliya.
Ceelka oo cabirkiisa lagu qiyaasay 90 mitir ayaa la adeegsan jiray xilli hore taas oo sababtay inuu qarsanaa oo anaan la arkin Dadka deegaanka ayaa sheegay inaysan ka war heyn ceelka ay ku dhacday Hooyo Asli, gurmad intii tabartooda ahna ay sameeyeen laakiin qadarta rabi ayaa dhacday.
Maamulka Deegaanka Garasbaaleey oo Wakaaladda Wararka Soomaaliyeed ee SONNA la hadlay ayaa sheegay in ay billaabeen qorshaha lagu aasayo Ceelka si looga badbaadiyo qatarta mar kale ka dhalan karta inay dadku ku dhacaan.
Previous articleWasaaradda maaliyadda Soomaaliya oo furtay shirka dib u habeynta hanaanka maaliyadda Soomaaliya
Next articleWasiirka Caafimaadka XFS iyo Guddomiyaha gobolka Banaadir oo kulan ay yeesheen kaga hadlay daadejinta adeega caafimaadka